Articles Published in 2019 | Sagal Radio Services
« prev 1 … 67 68 69 next »
Sagal Radio Services • News Report • November 3, 2019
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maanta socdaal u kuur-gelid ah ku tagay magaalada Baladweyne ayaa la wadaagay bulshada iyo maamulka heer Degmo iyo Heer Dowlad Goboleed ee Hirshabeelle sida ay uga go’an tahay hay’adaha heer Federaal samata-bixinta dadkeenna dhibaataysan iyo xal u helista musiibadan dabiiciga ah.
Sagal Radio Services • News Report • November 5, 2019
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Talaado ah waxaa ay xukuno kala duwan ku riday 9 eedeysane oo haweeney ka mid tahay,kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in la qabtay haweeney la dhalatay Hoggaamiyihii hore ee Daacish Abuubakar Al-Baqdaadi, kaddib howlgal laga fuliyay waqooyiga Suuriya.
Kaddib roobab saacadihii la soo dhaafay ka da’ayay magaalada Beledweyne ayaa waxaa uu sababay inuu xirmo garoonkii diyaaradaha Ugaas Khaliif, taasoo hakad gelisay diyaarado gargaar oo saaka ka degi lahaa garoonka.
Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa beeniyay in degmooyin ka mid ah deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle in lagala wareegay ururka Ahlu Sunna.